4 စပယ်ယာ3ထမ်းဘိုးတို့ကို4ဝါယာကြိုး အဓိက ပါဝါ ကြိုး ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - လက်ကားရောင်းအား စိတ်ကြိုက် မြင့်သည် အရည်အသွေး4စပယ်ယာ3ထမ်းဘိုးတို့ကို4ဝါယာကြိုး အဓိက ပါဝါ ကြိုး - Bohao
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ပါဝါ ကြိုး > သြစတြေးလျ ပါဝါ ကြိုး >4စပယ်ယာ3ထမ်းဘိုးတို့ကို4ဝါယာကြိုး အဓိက ပါဝါ ကြိုး
4 စပယ်ယာ3ထမ်းဘိုးတို့ကို4ဝါယာကြိုး အဓိက ပါဝါ ကြိုး
ငါတို့ ထောက်ပံ့ရေး4စပယ်ယာ3ထမ်းဘိုးတို့ကို4ဝါယာကြိုး အဓိက ပါဝါ ကြိုး ၏ မြင့်သည် အရည်အသွေး နှင့် စီအီး, GS ခွင့်ပြုချက်။ ငါတို့ ကျိန်စာ ကိုကို သို့ ပါဝါ ကြိုးs အများကြီး နှစ်ပေါင်းဖုံးအုပ် အများဆုံး ၏ ဥရောပ နှင့် အမေရိကန် စျေးကွက်။ ငါတို့ ဖြစ်ကြသည် မျှော်လင့်ပါတယ် သို့ ဖြစ်လာသည် မင်းရဲ့ ရေရှည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွင် Chတွင်a.
၁။ ကုန်ပစ္စည်း4Conductor ၃ ခု poles4Wires သည် Power Cord ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်
လိုင်းတွင်လုံလောက်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်တင်းပေးသောအခါ Power Cord သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ သူတို့က 120 ဗို့အားလျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်များနှင့် 480 ဗို့အား applications များချိတ်ဆက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးကြိုး၊ Mains Power ကေဘယ်၊ Outlet Cord၊ Power connector၊ Power Cord switch၊ Plug With Power Cord၊ ကွဲပြားခြားနားသောကရိယာများနှင့် sockets များတွင်အသုံးပြုသော power ကြိုးအမျိုးအစားများစွာကိုသင်တွေ့ခဲ့ရပေမည်။ ဤပါဝါကြိုးများအားလုံးသည်တိကျသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်မည်သည့်စက်ကိုမျှနံရံအပေါက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ။
၂။ ထုတ်ကုန် ၄ ခု၏ပါ ၀ င်မှု (၃) ခု (၄) ခု၏ပါ ၀ င်မှုဆိုင်ရာ Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်) Power Cord သည်
သြစတြေးလျ4ဝါယာကြိုးများအဓိက plug
NZS 3112 AS
လက်ရှိအဆင့် / ဗို့အား:
3 ထမ်းဘိုးတို့ကို4ဝါယာကြိုး
1.0 မီတာ, 1.5m, 1.8m, ထုံးစံအရှည်
၃။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်ဆိုင်သော (၃) ခုလုံး (၃) စွန်းတိုင် (၄) ၀ ိုင်ယာကြိုးများကြိုးကြိုးကိုအသုံးပြုခြင်း
Australia detachable ပါဝါကြိုး and power supply cords we supplied meet Australia specific standards and current REACH and RoHS requirements. Type I terminology, indicated above for Australia power cord plugs, is an alphabetical letter classification coding system used primarily for quickly identifying the electrical configuration of plugs, receptacles and ပါဝါကြိုး sets used in Australia
၄။ လျှပ်စီးကြောင်း (၃) ခု၊
Australia Power Cord,15A AS NZS 4417, NZS 3112 AS, power supply cords, New Zealand mains power cable SAA 10 Amp. In Australia, the electricity supplied by the normal wall inlet is called the “mains power system” and therefore Australian ပါဝါကြိုး are often referred to as Australia mains lead, Australia mains cords, Australia mains cables, Australia line cords, and mains power lead.
လျှပ်စီးကြောင်း (၃) ခု၊
၆။ လျှပ်ကူး (၃) လုံး (၄) ခုအား ၀ ိုင်ယာကြိုးပါဝါကြိုး ၄ ခုသယ်ဆောင်၊ သဘောင်္နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
hot Tags::4စပယ်ယာ3ထမ်းဘိုးတို့ကို4ဝါယာကြိုး အဓိက ပါဝါ ကြိုး ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်, မြင့်သည် အရည်အသွေး, အခမဲ့ နမူနာ, တွင် စတော့ရှယ်ယာ, လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း